Iray amin'ireo trangan-javatra vaovao indrindra amin'ny sehatry ny lalao Android dia ny PUBG Mobile. Mpampiasa an-tapitrisany no nametraka an'ity lalao ity tamin'ny findainy. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo lalao tsara indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Raha te hahafantatra ny zava-drehetra momba ity lalao malaza ity ianao, dia mety aminao ity sokajy ity.
Amin'ity fizarana ity dia ho hitanao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny PUBG Mobile. Ny vaovao farany momba ny lalao, ny vaovao rehetra tonga ao aminy, ary koa ny tetika sy fampianarana izay hirosoana amin'ny hafainganam-pandehan'ilay lohateny malaza. Raha liana amin'ity lalao ity ianao dia aza adino ity sokajy ity.
ny Aaron Rivas hace 3 volana .
ny Aaron Rivas hace 7 volana .
PUBG Mobile dia miomana ny hampitsahatra ny Royale Pass 17. Miaraka amin'izany, namoaka ny patch vaovao an'ny ...
Fanalahidy telo mahatonga ny PUBG: Fanjakana Vaovao no mety ho faran'ny PUBG Mobile
PUBG Mobile dia, miaraka amin'ny Call of Duty Mobile sy Garena Free Fire, iray amin'ireo hazakaza-piadiana malaza indrindra ao ...
Izay rehetra vaovao amin'ny fanavaozana PUBG Mobile 1.2 - patch notes amin'ny antsipiriany
ny Aaron Rivas hace 9 volana .
PUBG Mobile Season 16 dia efa hifarana. Andro vitsivitsy sisa, fa alohan'izany dia ...
PUBG Mobile no lalao nahazoam-bola be indrindra tamin'ny taona 2020
Ny areti-mifindra ateraky ny coronavirus dia loharanom-bola lehibe ho an'ny ankamaroan'ny orinasa teknolojia, izay ...
Ahoana ny fomba hatoriana haingana tsy misy sarimiaina ao amin'ny PUBG Mobile
Ao amin'ny PUBG Mobile, ny hafainganam-pandeha sy ny hakingana dia tena ilaina mba hahavelona ny fifandonana amin'ny fahavalo. Ao anatin'ny…
Ahoana ny fomba hampiasana ny safidy handefasana fitaovam-piadiana amin'ny PUBG Mobile
Raha gamer PUBG Mobile ianao dia mety fantatrao fa miaraka amin'ny fanavaozana farany navoakan'i Tencent tamin'ny lalao, ny ...
Hatramin'ny nanombohany tamin'ny finday, PUBG Mobile dia lasa iray amin'ireo lalao mahasoa indrindra ao ...
Ny zava-drehetra momba ny fanavaozana vaovao PUBG Mobile 1.1: naoty feno
Tencent dia namoaka ny patch patch ho an'ny PUBG Mobile fanavaozana 1.1, izay ny ...
Azo faritana: voarara ny tranokala PUBG Mobile any India
Tamin'ny volana septambra, noraran'ny governemanta indiana ny 117 fampiharana ny fiaviana sinoa ao amin'ny firenena izay mety nampiasa ...
Ahoana ny fomba hanaovana fitsambikinana lehibe amin'ny PUBG Mobile
Vao haingana izahay no nanazava ny fomba hanatanterahana ilay tigra mitsambikina amin'ny PUBG Mobile, teknika tena manaitra izay vitsy no mahalala sy ...